October | 2009 | The World of Pinkgold
Happy Wedding, Ma Nine Nine Sanay
Posted on October 30, 2009 by cuttiepinkgold
မနိုင်းနိုင်း မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ် ဆိုတဲ့သတင်းဟာ ကျွန်မအတွက်တော့ တစ်ကယ်ကို အထူးအဆန်းပါပဲ။ မနိုင်းနိုင်းကို အပျိုကြီးဘ၀နဲ့ပဲ ဆက်လက်ရှိနေစေချင်တာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ရုတ်တစ်ရက်ကြီး ကြားလိုက်ရတဲ့အတွက် အံ့သြမှင်သက်သွားခဲ့မိတာတော့ အမှန်ပါ။
2009 ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (28) ရက်နေ့က ကမ္ဘာကျော် ဘလောဂ့်ဂါ မနိုင်းနိုင်းစနေရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကို Western Park မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားကတော့ အမေရီးကားမှာနေတဲ့ ကိုမင်းမင်းဆိုတဲ့ အကိုပါရှင်။ မနိုင်းနိုင်းရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို နှစ်ဘက်မိဘ ဆွေမျိုးသားချင်း သူငယ်ချင်းများအပြင် နာမည်ကြီး ဘလောဂ့်ဂါများပါ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးဧည့်သည်အနေနဲ့ကတော့ စင်ကာပူက ခဏပြန်လာတဲ့ ကျွန်မတို့ သူငယ်ချင်း မောင်ပွတ်ကလည်း တက်ရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။
ကိုမင်းမင်းနဲ့ မနိုင်းနိုင်းစနေ (ခ) မမီးမီး တို့နှစ်ယောက် အသက်ထက်ဆုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင် စည်းစည်းလုံးလုံးပေါင်းစည်း နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ခြွေလိုက်ပါတယ်ရှင်။ ပျော်ရွှင်သာယာ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်းရှိသော မိသာစုတစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေ။
Filed under MBS and tagged blogger |	12 Comments
Things around Love
Posted on October 18, 2009 by cuttiepinkgold
အချစ်ဆိုတာ လူသားတိုင်းရဲ့ ဘ၀မှာ မဖြစ်မနေ ကြုံတွေ့ကြရတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိဘ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မ သူငယ်ချင်း ချစ်သူ.. စတဲ့ များပြားလှစွာသော အချစ်များနဲ့သာ ကျွန်မတို့ အသက်ရှင်သန် နေထိုင်ကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရရင်တော့ အချစ်ဆိုတာ အသက်ရှင်သန်ဖို့ မရှိ မဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အရာလိုတောင် ဆိုချင်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ နှလုံးသားကနေ ပေါက်ဖွားလာပြီး ကျွန်မတို့တွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်များစွာနဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မှု ရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း ၊ ၀မ်းနည်းခြင်း ၊ အောင်မြင်ခြင်း ၊ ကျရှုံးခြင်း ၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိခြင်း ၊ အတ္တစိတ်ကြီးမားခြင်းတွေဟာ အချစ်ကိုခံစားမိလို့ ၊ အချစ်နဲ့ ထိတွေ့မိလို့ ဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဆိုရင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် မှန်တယ်လို့ ကျွန်မက ဆိုချင်ပါတယ်။ အချစ်ဆိုတာ ကျွန်မတို့ရဲ့ လူနေမှုစရိုက်နဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေဆီမှာ များစွာအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
“The Art of Love” ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုရေးသားတဲ့ Erich Formm ဆိုသူကတော့ “လူတိုင်းကို မချစ်နိုင်ပဲနဲ့ လူတစ်ယောက်တည်းကို စစ်မှန်စွာ မချစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့” ။ ဒီစကားက စိတ်ဝင်စားဖို့တော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဟာ လူတိုင်းကို မသိ ၊ မချစ်ပဲနဲ့ ကျွန်မချစ်ချင်တဲ့သူတွေကို ချစ်နေနိုင်တာပါပဲ။ သူဘာကြောင့် ဒီလိုပြောဆိုခဲ့သလဲ ဆိုတာတော့ ကျွန်မလည်း မသိပါဘူး။ သူကတော့ လူတိုင်းကို မေတ္တာထားတတ်ဖို့ အလေးပေးပြောဆိုခဲ့တာ နေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်မ စဉ်းစားမိတာကတော့ လူတိုင်းကို ချစ်မနေနိုင်ရင်တောင် လူတစ်ဦး တစ်ယောက် အုပ်စုလိုက်အပေါ်မှာ နားလည်ခံစားမှု အဆင့်အမျိုးမျိုး ရှိဖို့ လိုအပ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ လူတွေကို နားလည်ပေးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ နားလည်ပေးတတ်ဖို့ ဆိုတာကလည်း လူတွေရဲ့ စိတ်လိုအပ်ချက်တွေဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ၊ ဘယ်လိုလူမျိုးမှာ ဘာရှိနေတယ်ဆိုတာ အကြမ်းဖျင်းသိနေတဲ့ ဗဟုသုတရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Erich Formm ကတော့ အချစ်ဆိုတာ အရေးကြီးမှန်း လူတိုင်းသိနေကြပေမယ့် ချစ်တတ်ဖို့ ၊ အချစ်စွမ်းအင်ကို ဘယ်လိုမြှင့်တင်ဖို့ဆိုတာကိုတော့ တစ်ယောက်ကမှ မလေ့လာပဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ နေကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေပြောပြောနေကြသလို အချစ်ဟာ တစ်ကယ်ပဲ အရေးပါရဲ့လား ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်မလည်း ခုချိန်ထိ သေသေချာချာ မသိသေးတာကတော့ ၀န်ခံရပါလိမ့်မယ်ရှင်။ အချစ်ရဲ့ အရေးပါမှုနဲ့ အခြားလူမှုဝန်းကျင်မှာ ဆက်စပ်နေတဲ့ အရာတွေကို တွေးကြည့်ချင်ပါသေးတယ်။
အချစ်ဆိုတာ အရေးပါတယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေကျပြန်တော့လည်း လူအဖွဲ့အစည်းမှာ အချစ်ကို ထည့်စဉ်းစားဖို့ မလိုအပ်တာတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ လူမှုကိစ္စတွေလောက် အချစ်ဟာ အရေးမပါတာမျိုးလည်း ရှိနေတတ်ပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင် အချစ်ဟာ ပညာရေး ၊ တရားရေး ၊ ဘာသာရေး စတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ကော ဘယ်လောက်များ ဆက်စပ်မှု ရှိနေပါသလဲ? Read the rest of this entry →
Filed under ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း |	4 Comments
Miss People 2009 (Mandalay)
Posted on October 16, 2009 by cuttiepinkgold
Miss People 2009 (Mandalay) ပွဲကြီးကို 2009 ခုနှစ် ၊ အောက်တိုဘာလ (4) ရက်နေ့က Sedona Hotel (MandalaY) ရေကူးကန်ဘေးမှာ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲကြီးကို ကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း နေ့လည် (၁) နာရီမှာ ဈေးရောင်းပွဲတော်နဲ့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ညနေ (၅) နာရီမှာတော့ စတိတ်ရှိုး အစီအစဉ်ကို စတင်ခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး အဆိုတော်များလည်းဖြစ်၊ လက်ရှိမှာ ပေါက်နေတဲ့ သီချင်းတွေရဲ့ အဆိုရှင်များလည်း ဖြစ်ကြတဲ့ ဖော်ကာ (Wanted) ၊ ဂျီလတ် ၊ The Last ၊ အနဂ္ဂ ၊ Cobra ၊ သံသာဝင်း ၊ ဂျင်းနီ ၊ Princess အဖွဲ့ တို့က မေတ္တာဖြင့် သီဆို ဖျော်ဖြေ ခဲ့ကြပါတယ်။
ညနေ (၇) နာရီမှာတော့ Miss People ပြိုင်ပွဲကို စတင် ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမှာ အကဲဖြတ်ဒိုင်များအဖြစ် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်များ ဖြစ်ကြတဲ့ အကယ်ဒမီ လူမင်း ၊ အကယ်ဒမီ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ၊ မယ်လိုဒီ တို့နဲ့အတူ မန္တလေးမြို့မှ မြို့မိ ၊ မြို့ဖများက ဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မန္တလေးက ပြိုင်ပွဲဝင်လေးတွေဟာ အလွန်စတိုင်လ်မိုက်ကြတဲ့အတွက် Miss People ဆုကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရွေးချယ်ခဲ့ရပါတယ်။ Miss People ပြိုင်ပွဲကို ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့သူ စုစုပေါင်း ၄၃ ဦးရှိခဲ့ပြီး People Magazine မှ Miss People, 1st Runner Up, 2nd Runner Up , Best Style ဆုများအပြင် ပရိတ်သတ်များက ရွေးချယ်ပေးတဲ့ People’s Choice ဆုကိုလည်း ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
Filed under Miss People and tagged Miss People 2009 |	Leaveacomment
P for Pink Gold
Posted on October 9, 2009 by cuttiepinkgold
It’s harder than it looks! Copy to your own note, erase my answers, enter yours, and tag as many friends as you wish. Use the first letter of your name to answer each of the following questions. If the person before you had the same first initial, you must use different answers. You cannot use any word twice and you can’t use your name for the boy/girl name question.
1. What is your name: Pink Gold
2. A four Letter Word: Peak
3. A boy’s Name: Pitt
4. A girl’s Name: Pinky
5. An occupation: Professional Marketing
6. A colour : Purple
7. Something you’ll wear: Panty
8. A food: Prawn
9. Something found in the bathroom: Ponytail
10. A place: Paris
11. A reason for being late: Path Unclearness
12. Something you’d shout: Pa Lote Tote Gyi
13. A movie title: Pretty Woman
14. Something you drink: Pine Apple Juice
15. A musical group: Princess
16. An animal: Polar Bear
17. A street name: Pansodan
18. A type of car: Parado
19. The title ofasong: Papercut- Linkin Park
20. A verb: Peep
Filed under Tag |	9 Comments
Posted on October 6, 2009 by cuttiepinkgold
Miss People 2009 Mandalay ပွဲကိုလုပ်ဖို့ အတွက် မန္တလေးကို တစ်ပတ်လောက် သွားရောက်နေထိုင်းပြီး ဒီနေ့ မနက်ပဲ ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ မန္တလေးကတော့ အရင်လို့ ပူတုန်းပါပဲ။ အရင်လို လွတ်လပ်မှုတွေ ရှိတုန်းပါပဲ။ ပွဲမတိုင်ခင် တစ်ရက်မှာ YUFC နဲ့ ရတနာပုံ အသင်းနှစ်သင်းရဲ့ ပွဲကြီး ပွဲကောင်းကိုလည်း ကြားရပါသေးတယ်။ မန္တလေးမှာ နေခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်လုံး အလုပ်တွေ အလွန်များခဲ့သလို ပွဲနေ့ကလည်း အဆင်မပြေမှုတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ အရမ်းကို ပင်ပန်းနေပါတယ်။ ပိုစ့်သစ်တွေ ရေးနိုင်ဖို့ အားယူနေပါတယ်။
Filed under Miss People |	2 Comments